China Diesel Hydraulic Excavator CE750-8 ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
1. Nnụnụ mmanụ dizel na-agbaso ụkpụrụ gburugburu ebe obibi kacha ọhụrụ.
2. Hydraulic excavator nwere ike ịkwado ya na electromotor nke nwere uru pụrụ iche nke efu emissin, obere mkpọtụ, obere ọrụ & mmezi.
6. Ejiri ya na Cummins diesel engine, ikuku na-agbaso ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi kachasị ọhụrụ, a pụkwara ịhọrọ ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ na nkọwa mmanụ ụgbọala.
7. BONNY Ngwuputa hydraulic excavator na-anabata sistemu lubrication na-akpaghị aka nke mba ama ama, ma na-anabata usoro njikwa na-agbanwe agbanwe na-akpaghị aka na mmanu nkwonkwo nke igwe dum n'oge oge yana ọnụọgụ, na-ebelata ike nke ọrụ mmezi na oge mmezi.
CE750-8 bụ 80-ton nnukwu hydraulic excavator nke BONNY.A na-eji mmanụ diesel na-arụ ya ma jiri injin na-ebugharị ya.Ngwa abụọ na-arụ ọrụ nke backhoe na shọvel n'ihu bụ nhọrọ.Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na Ngwuputa ihe, ihe nchekwa mmiri.Ọ dị irè, dị mfe iji rụọ ọrụ na idobe ya.
Ibu igwe (Backhoe) t 73.2-75.4
Ibu igwe (shọvel ihu) t 77.6-79.8
Ike ịwụ (Backhoe) m3 3.0-4.5
Ikike ịwụ (Ihu-shọvel) m3 3.5-5.0
Enyere ike/ọsọ kW/rpm 565/1800
Oke.eruba L/min 2×489
Oke.nrụgide ọrụ MPa 34.3
Oge ịgba ígwè ọrụ s 22
Ọsọ ọsọ rpm 6.3
Ọsọ njem km/h 3.3 / 2.5
Oke.na-adọkpụ ike KN 605
Ikike ọkwa % 70
Data na-arụ ọrụ Azụ azụ Ihu-shọvel
Oke.igwu ala iru mm 12036 9778
Oke.igwu ala omimi mm 7389 3238
Oke.igwu ala elu mm 11578 11149
Oke.nbudata elu mm 7684 8037
Oke.igwu ala ike nke Stick KN 334 410
Max.breakout ike nke ịwụ KN 356 410
1.Gịnị bụ ọnụ ahịa gị?
Ọnụ ahịa anyị nwere ike ịdịgasị iche dịka nhazi ngwaahịa dị iche iche na ihe ndị ọzọ.Mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ, anyị ga-ezitere gị ọnụahịa emelitere.
2.Ị nwere MOQ?
Mba, anyị enweghị MOQ.Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa niile n'ụwa niile.
3.Ị nwere ike ịnye akwụkwọ ndị dị mkpa?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo/Conformance;mkpuchi;Mmalite, na akwụkwọ mbupu ndị ọzọ ebe achọrọ ya.
4. Kedu ụdị ụzọ ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị: nkwụnye ego 30% tupu oge eruo, 70% itule megide nnomi B/L.
5.What bụ nkezi ụzọ oge?
Oge nnyefe bụ ụbọchị 90 mgbe ịnatachara nkwụnye ego ahụ.Oge nnyefe ga-amalite mgbe (1) anyị natachara ụgwọ gị maka nnyefe, yana (2) anyị nwetara nkwado ikpeazụ maka ngwaahịa gị.N'ọnọdụ niile, anyị ga-agbalị ike anyị niile iji gboo mkpa gị.Ọtụtụ mgbe, anyị nwere ike ime nke a.
Nke gara aga: Diesel Hydraulic Excavator CE650-8
Osote: Diesel Hydraulic Excavator CE1000-8